तुरुन्तै हेर्नुहोस् कल्पना दाहालको घरमा पुग्दा देखियो यस्तो हालत, घन्टौ हिड्नु पर्ने,पुरा भएन घर बनाउने सपना ! – Complete Nepali News Portal
तुरुन्तै हेर्नुहोस् कल्पना दाहालको घरमा पुग्दा देखियो यस्तो हालत, घन्टौ हिड्नु पर्ने,पुरा भएन घर बनाउने सपना !
शुक्रबारै अबेर बसेकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार संविधानकाे धारा ७६ (५) मबाेजिम नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धन र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गरिसकेका थिए ।
तर रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाे हाे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवाद्वारा परेकाे दाबी अस्वीकार गर्नुभएकाे थियाे ।
यसअघि पनि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक रहेकाे ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाे थियाे ।